डा. केसीको उपचारका लागि दोस्रो चिकित्सक टोली इलामतर्फ - Everest Dainik - News from Nepal
डा. केसीको उपचारका लागि दोस्रो चिकित्सक टोली इलामतर्फ
काठमाडौं, माघ ३ । नौ दिनदेखि अनशनरत प्रा.डा. गोविन्द केसीको स्वास्थ्य उपचारका लागि स्वास्थ्य मन्त्रालयले दोस्रो चिकित्सकको टोली इलाम पठाएको छ ।
मन्त्रालयले बीपी कोइराला स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान धरानबाट ६ जना चिकित्सकको टोली बिहीबार इलाम पठाएको हो । यो चिकित्सक टोली केही दिन डा.केसीसँगै रहने बताइएको छ ।
याे पनि पढ्नुस ४९ जना उद्यमीलाई अनुदान
उपप्रधान एवम् स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्री उपेन्द्र यादवको निर्देशनमा डा. केसीको स्वास्थ्य उपचारमा संलग्न रहने गरी इलाम पठाइएको हो।
प्रतिष्ठानका सहायक निर्देशक डा. विकास शाहको नेतृत्वमा एनेथेस्थेसियाका डा. आशिस सुवेदी, आइसियका डा. अदिती महासेठ, कार्डियोलोजिष्ट, डा. राजकुमार गजमेर, इमर्जेन्सी फिजिसियन केशव नेपाल सहित ल्याब टेक्निसियन, नर्स लगायतको टोली इलाम गइरहेको हो।
याे पनि पढ्नुस पूर्वसचिवद्वारा कोषमा १० हजार प्रदान
ट्याग्स: Dr Govind kc, ilam